ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဘောလုံးသမားများ - SPORTS MYANMAR
ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရပ် ပျံ့နှံ့မှုဟာ ဥရောပမှာ အီတလီက အဆိုးဆုံး ဖြစ်သလို ၊ လက်ရှိမှာလဲ စပိန်ကလဲ ကူးစက်မှုနှုန်းတွေ မြင့်တက်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
မနေ့ည ကတော့ စပိန်လာလီဂါ မှာလဲ အီတလီ ၊ အင်္ဂလန် တို့ နည်းတူ ပထမဆုံး ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ ဘောလုံး လောကသားတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကစားသမားတွေ ကတော့ ဗလင်စီယာ ကစားသမားတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်တန်း ကစာသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ မန်ဂါလာ ၊ ဂါရေး ၊ ဂါယာ နဲ့ အခြား ဝန်ထမ်း2ဦး တို့ ကူးစက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်သွားခဲ့ ပါတယ်။
အီတလီမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 24 နာရီ အတွင်း ဗိုင်းရပ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေဟာ စုစုပေါင်း 368 ယောက် အထိ ရှိလို့ တော်တော်လေး ထိတ်လန့် သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စုစုပေါင်း သေဆုံးမှုက 1809 ယောက် အရှိ ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ၊ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေရတာ 1672 ယောက် ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံထားရသူ အရေအတွက်ဟာ 20603 ယောက် ရှိလာသလို ၊ မနေ့က တစ်ရက်ထဲမှာပဲ ဗိုင်းရပ် ကူးစက် ခံထားရကြောင်း အတည်ပြုချက်က 2853 ယောက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ ဖီအိုရင်တီးနား ၊ ဂျူဗီ နဲ့ ဆမ်ဒိုးရီးယား ကစားသမား 11 ယောက် အထိ ပါဝင်ထားပါတယ်။
အဲဒီလို အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် အီတလီ အားကစား ဝန်ကြီးက ယူရို 2020 ပြိုင်ပွဲကို နောက်ဆုတ် ကျင်းပဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အပြင် ၊ စပိန်ကလဲ အလားတူ ဖြစ်ရပ်တွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ လာလီဂါ ပြိုင်ပွဲကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ဖို့ အထိ စဉ်းစားနေပြိ ဖြစ်ကြောင်း ပြိုင်ပွဲတာဝန်ခံ ဥက္ကဌ တီဗက် က ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်ထိ ဗိုင်းရပ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဘောလုံးသမား စာရင်းကတော့ –
1. တီမို ဟူဘာ (ဟန်နိုဘာ)
2. ဂျိမ်း ဟွန်း (ဟန်နိုဘာ)
3. ဒါနီလီ ရူဂါနီ (ဂျူဗီ)
4. မီကယ် အာတီတာ (အာဆင်နယ်)
5. ကလပ် ဟတ်ဆင် အိုဒွိုင်လ် (ချဲဆီး)
6. အိုမာ ကော်လီ (ဆမ်ဒိုးရီးယား)
7. အယ်ဘင် အက်ဒဲ (ဆမ်ဒိုးရီးယား)
8. အန်တိုနီယို လာ ဂူမီနာ (ဆမ်ဒိုးရီးယား)
9. မော်တန် သော်ဘီ (ဆမ်ဒိုးရီးယား)
10. ဘာတော့ ဘရက်ဇင်းစကီး (ဆမ်ဒိုးရီးယား)
11. ဂျာမန် ပီဇဲလား (ဖီအိုရင်တီးနား)
12. ပက်ထရစ် ကူထရိုနီ (ဖီအိုရင်တီးနား)
13. ဒူဆန် ဗလင်ဟိုဗစ်ချ် (ဖီအိုရင်တီးနား)
14. ဂါရေး (ဗလင်စီယာ)
15. မန်ဂါလာ (ဗလင်စီယာ)
16. ဂါယာ (ဗလင်စီယာ)
17. ဂျိုနသန် ဒီ ဟေဇု (အယ်လ်ချီ) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန် မှာတော့ ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာ ဘောလုံးပွဲတွေ ကို ပြန်လည် စတင်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ၊ ဒီရက်ပိုင်း မှာပဲ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်တွေကို ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်လျှက် ရှိနေပါတယ်။ ကစားသမား အများစုကတော့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းဆီ ပြန်လည် လာရောက်ဖို့ ဆန္ဒမရှိကြသေးပဲ ၊ အနေအထားတွေကို စောင့်ကြည့် အကဲခတ်သွားချင်နေဟန် ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံး စကားသံ ထွက်လာတဲ့ သူကတော့ အက်စ်တွန်ဗီလာ အသင်းရဲ့ လီဗာပူး ဂိုးသမားဟောင်း ပီပီ ရေနာ ပါ။ အင်္ဂလန် အနေနဲ့ အခုထက်ပိုပြီး ဗိုင်းရပ်ကိစ္စကို လေးလေးနက်နက် ရှုမြင်သင့်တယ်လို့ ဝေဖန်လိုက်ပြီး ၊ လက်ရှိ အခြေအနေမျိုးမှာ ဘောလုံးပွဲ ကျင်းပဖို့ စဉ်းစားနေတာဟာ တော်တော်လေး စွန့်စားလွန်းရာ ကျတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီး ဗိုင်းရပ် အန္တရာယ် ကနေ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ…….